China, Kurume 4, 2021
musha United Kingdom Vatambi Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yese yeChirungu Chinyorwa chinonyanya kuzivikanwa nezita rake rekutanga reGT "Arya Stark". Our Maisie Williams Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, hukama hwehukama, hupenyu hwehupenyu, hwechokwadi hwemhuri, mararamiro uye nezvimwe zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva kubva pane basa rake seArya Stark pane hit HBO series 'Game of Thrones'. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Maisie Williams 'biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, Margaret Constance "Maisie" Williams akazvarwa pazuva re15th raApril 1997 kuBristol muEngland. Ndiye wekupedzisira pavana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Hilary Francis nababa vake, Gary Williams.
Mucheche Maisie aive wekupedzisira pavana vana akazvarwa kuvabereki vake.
Nhamba yeChirungu yechena machenyu neEurope midzi yaiva nemwedzi mina chete apo vabereki vake vakarambana. Mushure mekurambana, Maisie akanga asingabatsiri akakwidziridzwa naamai vake kuChitton muSomerset, England uko akakurira pamwe nehanzvadzi dzake vakuru; James, Beth naTed.
Maisie Williams akakurira kuClutton naamai vake uye vanun'una vatatu.
Kukura kuChitut, wechidiki Maisie akararama izvo zvaakatsanangura se'upenyu humwe '. Imba yaakakurira yaiva chikamu chebasa rekugara kwevanhu muBrithani paaipinda chikoro chakanaka ndokuita zvikwereti. Kunyange zvakadaro, Maisie aiva nehope huru dzekuva dancer akasimbiswa uye akabatwa kune dzimwe kurota dzaaidavira kuti yaizoita mutsauko mukuru muupenyu hwake.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Maisie aive nedzidzo yake yekutanga kuClutton Primary School asati aenderera mberi kuNorton Hill School kuMidsomer Norton. Ndichiri kudzidza pachikoro chesekondari, Maisie akabatanidza vadzidzi nekutora zvidzidzo zvekutamba kuSusan Hill Chikoro cheDhanzi.
Maisie Williams nemumwe waanodzidza naye Joe Knight uye munyori Sue Purkiss kuNorton Hill School muna 2009.
Pakazosvika Maisie akwegura 11, mudzidzisi wake wekudhanha akamukurudzira kuti aine chikwangwani chekuratidzira tarenda iyo yakagadzirwa semusangano nemasinari aizodzidzisa vana kuti vave nyenyedzi mukuita, kutamba uye kuimba. Paaisayina chiratidziro chetarenda, Maisie akawana mujeri, Louise Johnson uyo akamukurudzira kuti atange kuongorora nyaya dzekuita basa.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu uye Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Maisie akanga asiri wekukurumidza kubvumira kurota kwaainge aine pamusoro pekuvaka basa mukudha uye kuva muchengeti anotsika. Kunyangwe zvakadaro, akagamuchira dambudziko ndokuenderera mberi kunyoresa kuti aite basa muNanny McPhee uye Big Bang.
Maisie Williams akatanga kuenda kunoongorora paakanga ave nemakore gumi nerimwe muna11.
Maisie akazvipira akamupa zvakanakisisa panguva yezvinyorwa zvepamusoro uye akazviisa pasi kune maviri ekupedzisira asi akakundikana kuwana chero rutivi mumapurogiramu maviri emagetsi nekuda kwechinhu chaicho chokuti akatarisa zvikuru.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Kumuka Mukurumbira Nhau
Achifambira mberi, Maisie Williams akaongorora uye akaita kuti nyanzvi yake inoshanda seArya Stark, tomboyish bakatwa-inotsigira mutsivi paHBO yakatengesa mitambo ye 'Game of Thrones'.
Maisie Williams muMutambo weChigaro 2011.
Akagamuchira kurumbidzwa kwakanaka nebasa rake mumutambo wakatanga kuratidzwa mugore ra2011 uye akahwina mubairo wePortal weMutambi Wakanakisisa Wekutsigira muTerevhizheni pamwe neiyo Portal Mubairo weYakanakisa Muiti wechidiki mu2012. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Relationship Life Facts
Maisie Williams achiri kutoroora panguva yekunyora. Tinokuudza chokwadi pamusoro pacho kufambidzana nenyaya uye hukama hwehukama hwehuno. Kutanga, Maisie haazivikanwe kuti akambotaura nomumwe murume asati asangana nemukomana wake, Ollie Jackson.
Maisie Williams nemukomana wake Ollie Jackson.
Ollie British Auto Racer yakakurumbira yeBritish Touring Car Championship. Maisie naOllie vakatanga kufambidzana muC2015 uye vakaramba vakabatana kubva ipapo. Munguva iyi, hapana yemhirizhonga ine vana (kana) mwanasikana kana (s) kunze kwechato sepanguva yekunyora.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Maisie Williams anobva kumhuri yepakati-kati yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Pamusoro peMaisie Williams 'Baba: Gary Williams ndiye baba vaMaisie. Akarambana amai vaMaisie apo muiti wemasikirwo akanga ari makore ane gumi nemana, Nokudaro, mutambikadzi nababa vake vakatsaura hukama kusvikira zuva. Anofarira kufadza amai vake uye nhanho-baba paZuva raBaba pane kutaura nezvebaba vake venyama vakasiya achiri muduku.
Mufananidzo usingawanzoitika weaMaisie Williams mudiki nababa vake Gary Williams.
Pamusoro paMaisie Williams 'Amai: Hilary Francis ndiye amai vaMaisie. Amai vakatsigira vakashanda semutongi weiyunivhesiti panguva yeupenyu hweMaisie uye zvino vanoshumira semutungamiriri uye mubatsiri wega kumusikana.
Maisie Williams naamai vake Hilary.
Pamusoro peMaisie Williams vakoma vake: Maisie Williams ane vanin'ina vatatu chete avo vese vakazvarwa kune vabereki vamwe. Ivo vanosanganisira vakoma vake vakuru James naTed pamwe nasisi vake mukuru Beth. James akapedza kudzidza uye anofarira zvemitambo panguva iyo Ted aidzidza kuBath koreji uye anoshanda kuCheddar Gorge & mapako sepanguva yekunyora. Chinyanyo kuzivikanwa nezve hanzvadzi yaMaisie chete Beth asides chokwadi chekuti iye akaroora kune mumwe Tony Pow uye ane 2 vakanaka vana naye.
Maisie Williams vakoma. Kubvira (LR): James, Beth naTed.
Nezve hama dzaMaisie Williams: Kure kubva kumhuri yepadyo yaMaisie Williams, vanasekuru navanamai vake vaive William H. Pitt naAudrey F. Bonning nepo zvishoma zvichizivikanwa pamusoro pasekuru nasekuru vake. Uye zvakare, Maisie ane babamunini babamunini, babamunini, babamunini uye babamunini izvo zvisati zvichazoonekwa mune zviitiko zvine mukurumbira zvehupenyu hwehudiki hwake.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Chii chinoita kuti Maisie Williams afare? Gara kumashure apo isu tichikuunzira maitiro ehunhu hwaMaisie kuti akubatsire iwe kuwana yakazara mufananidzo wake. Kutanga, Maisie's Persona isanganiswa yeAries Zodiac hunhu, Iye ane runyararo, akazvimiririra uye anotsigira.
Mukuwedzera, Maisie anonakidzwa nekuongorora zvinhu zvehupenyu hwake hwega uye hwega. Ane zvakawanda zvinofadza uye zvinonakidza izvo zvinosanganisira kutamba mutongi pafoni yake, kutamba, kufamba uye kugovana.
Kuparadzanisa ndechimwe chezviitiko zveMaisie William zvekuvaraidza.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle Facts
Maisie Williams ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora mamirioni matanhatu panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaMaisie zvakanyanya kunobva pamubhadharo wake sa “Arya Stark” muHBO yakarova nhevedzano 'Game of Thrones' sezvo achinzi akabhadharwa $ 6 pachikamu mumwaka wechinomwe na175,000 weterevhizheni.
Zvisinei, Maisie anorarama mararamiro anochengetedza sezvo asina imba kana sapanguva yekunyora. Saizvozvowo, zvishoma zvinonyatsozivikanwa pamusoro pemotokari yake yekuunganidza nekuti iye achiri kutarisa kutyaira motokari yega, zvisinei nokuti yakapedza sei kuedza kwake kutyaira mu2014.
Maisie Williams achiri kuzoonekwa achityaira mota yake wega.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Maisie Williams ane akati wandei ematatoo. Zvinosanganisira mazwi akanyorwa kuti "Hakuna Mumwe" kumashure kwemutsipa wake, "diki diki" paruoko rwake rweruboshwe, ruva rakadzama pane bicep yake yekurudyi uye "07-08-09" paruoko rwake rweruboshwe. Iwo manhamba anomiririra zuva raakaziva kuti akakandwa muMutambo weZigaro.
Maisie Williams ane maatatoo madiki pamutsipa wake, kumberi uye bicep.
Nezvechitendero chake, Maisie anowanzotendwa kuva muKristu paanoonekwa seanotenda kune Mwari mune dzimwe nzvimbo.
Maisie aimbove akaonekwa achiputa uye akaonekwa ari oga.
Zvinyorwa zveMaisie Williams achinwa uye achisvuta.
Iye ndiye co-launcher yeiyo social media app inonzi Daisie. Chirongwa ichi chakanangana nekuunza vanhu vekugadzira pamwechete uye kukurudzira kubatana.
"Maisie" ndiro zita remadunhurirwa remusikana. Akatora iro zita kubva kune yakakurumbira comic strip inonzi The Perishers.
Maisie Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Maisie Williams Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!